Intwasahlobo yango-2017 ibifudumele emlandweni orekhodiwe | Isimo Sezulu Senethiwekhi
ESpain, ezikhathini zamuva nje, amarekhodi ayaphulwa cishe kuzo zonke izinkathi zonyaka. Ngesikhathi sentwasahlobo esisanda kuyidlula amanani asetshenzisiwe abephakeme kunokujwayelekile kusukela ngo-1965, okuyilapho i-AEMET yaqala ukuba namarekhodi ahlanganisiwe wezwe lonke.
Kusukela ngalowo nyaka, iSpain ayikaze ibhekane nentwasahlobo eshisayo njengaku-2017. Kepha akumele nje sikhulume ngamazinga okushisa aphezulu, kepha futhi ukuncipha kwemvula efinyelela ku-23%. Ngenxa yalokho, ihlobo lingaba nzima kwezinye izindawo, ikakhulukazi lapho lingani khona nhlobo noma lingenzi lutho ngaleyo nkathi.
1 Amazinga okushisa entwasahlobo 2017
2 Imvula yasentwasahlobo ka-2017
Amazinga okushisa entwasahlobo 2017
Kusukela ngoMashi 1 kuya kuMeyi 31 izinga lokushisa elijwayelekile lalikhona 1,7 degrees Celsius ngaphezulu we kusho ukuthatha njengesikhathi inkomba iminyaka 1981-2010); okungukuthi, kwakungu-15,4 ° C. Leli nani lingu-0,06ºC ngaphezulu kunenani eliphakeme kakhulu langaphambilini, elifinyelelwe ngo-2011.
Uma sikhuluma ngezindawo, i-AEMET igqamisa ukuthi bekufudumele ikakhulukazi eNavarra, Aragon, maphakathi nezwe i-Andalusia, Izwe laseBasque, iCastilla y León neLa Rioja; kufudumele kuyo yonke inhlonhlo naseziQhingini zaseBalearic, naphakathi kokufudumala nokufudumele ngokweqile eCanary Islands.
Amazinga okushisa aphakeme kakhulu afinyelelwa e-Orense (37,6ºC) ngoMeyi 24, esikhumulweni sezindiza iGranada (37ºC) ngoMeyi 25, eBilbao (36,4ºC) ngoMeyi 25, esikhumulweni sezindiza saseLanzarote (36,1ºC) ngo-Ephreli 17 naseGran Canaria (34,2ºC) nango-Ephreli 17.
Imvula yasentwasahlobo ka-2017
Ngentwasahlobo edlule amalitha ayi-133 ngemitha eyisikwele awile ngokwesilinganiso, amele i- 23% ukuncishiswa. Yize kunjalo, uMashi ubenomuntu onomswakama kakhulu onemvula engu-29% ngaphezulu, kepha u-Ephreli ubomile kakhulu njengoba kuna imvula engaphansi ngama-60% kunokujwayelekile, kanti ngoMeyi ibe ngaphansi ngama-23%. Kwakuyisikhathi semvula kuphela eningizimu-ntshonalanga ye-Andalusia eningizimu-mpumalanga yoMphakathi waseValencian.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Intwasahlobo yowezi-2017 ibe yimfudumalo emarekhodi